Tag: ahịa ọrụ infographic | Martech Zone
Tag: ahịa infographic
Usoro igodo mgbasa ozi nke ndi mmadu aghaghi itinye oru ndi ahia. Ọtụtụ ụlọ ọrụ dị iche na nke abụọ, mana ndị ahịa gị enweghị nkewa dị otu ahụ. Ozugbo ị na-elekọta mmadụ, ha ga-eji ọwa a maka ajụjụ, nkọwa na mkpesa. Ozi ọma ahụ bụ na ị nwere ike igosipụta ọrụ aka ndị ahịa gị n'ihu ọha, si otú a na-ere ahịa otu ị si eme ya na atụmanya. Ihe ụlọ ọrụ nwere ike ọ gaghị amata bụ na ọ bụ ndị ahịa gị nwere nke kachasị ukwuu